Sidee looga shaqeeyaa wada shaqaynta miyiga tuulo cidla ah | Wararka Safarka
Isbaanishka, meelaha miyiga ah waxaa ku dhaca dhibaatooyin daran oo xaalufka. U guuritaanka magaalooyin badan iyo dad da 'ah oo da' yar ayaa ka tagay magaalooyinka iyo tuulooyinka qaar gebi ahaanba laga tagay, qarka u saaran in la waayo. Si kastaba ha noqotee, marka la eego aragtidan rajo xumada ah, dadaallada ayaa soo baxaya hal abuurayaal doonaya inay dadkan dib ugu soo celiyaan nolosha waxaana taas sii xoojiyey isbeddellada sii kordhaya ee dadku raadinayaan goobo nadiif ah oo xasilloon si ay uga badbaadaan wasakheynta iyo xawaaraha magaalooyinka.
El qowlaysiga waa ikhtiyaar xiiso leh in fursado shaqo laga abuuro tuulooyinka laga tagayWaa dadaal ka baxsan dalxiiska taas oo waxtar weyn u yeelan lahayd in la dhiso dad, dib loo nooleeyo dhaqaalaha magaalooyinka, la ogaado, loo furo fursado cusub iyo in laga caawiyo dib u soo noolayntooda. Laakiin intaanan kuu sheegin sida loo sameeyo wada shaqeyn miyi, aan dhisno waxa ay tahay iyo sida saxda ah qowlaysiga.
1 Waa maxay wada shaqaynta sidee bayse u shaqaysaa?
2 Waa maxay wada shaqaynta reer miyiga?
2.1 Meelo tayo leh oo la heli karo
2.2 Laba ilo oo qiimo leh
3 Sidee looga shaqeeyaa iskaashi aad wada shaqeysato tuulo cidla ah?
3.1 Meel bannaan hel
3.2 Baro booskaaga
3.3 Ka fikir soo jeedintaada qiimaha
3.4 Abuur istiraatiijiyad isgaarsiineed
3.5 Qaabso noocee ah ayaan sameeyaa?
Waa maxay iyo sidee buu kan qowlaysiga?
El qowlaysiga waa hab lagu shaqeeyo taas waxay u oggolaaneysaa xirfadlayaal madax-bannaan inay wax wadaagaan isla markaana ku horumariyaan isla goobta shaqada. Sidan oo kale, in kasta oo mid kastaa ka shaqeeyo mashaariic kala duwan, maaddaama aysan xitaa u baahnayn inay ka mid noqdaan shirkad isku mid ah, iskaashiga u dhexeeya dadka leh xirfado kala duwan iyo qaybaha kala duwan iyo se wuxuu dhiirigelinayaa abuurista mashaariic wadajir ah. Laakiin ... Sidee boosku uga duwan yahay qowlaysiga ka socda xafiis wadaag ama xarun ganacsi oo dhaqameed? Qiyaastii falsafadan shaqo, beel kamid ah shaqaalayaal. Bulshadan waxaa caadiyan maamula a dhise bulshada, qofka mas'uulka ka ah ogaanshaha astaanta xirfadeed ee mid kasta la shaqeeye taasna waxay ku xireysaa midba midka kale si ay u quudiyaan, sidaas darteed, ruuxa meelahaas.
Sidee qowlaysiga? Isaga laftiisa, hawlgalku waa sahlan yahay, maadaama uusan u baahnayn kaabayaal aad u fara badan oo iyaga lagu kiciyo. Maaddooyinka aasaasiga ahi waxay noqon doonaan: xiriir internet oo wanaagsan, xeerar wada-noolaansho iyo meel bannaan oo loo furi karo dadka kale. Sidaa darteed, qof kastaa wuu la xiriiri karaa laptop-kiisa oo wuxuu ku biiri karaa bulshada. Xaqiiqdii, qaar badan oo ka mid ah dadaalladaani waxay ka soo baxaan xafiisyada jira oo ay ku yaallaan meelo badan oo milkiilahooda uu go'aansado inuu u furo xirfadleyaasha kale iyo, dabcan, fikradahooda.
Waa maxay wada shaqaynta reer miyiga?
Mid ka mid ah faa'iidooyinka meelaha bannaan qowlaysiga waa dabacsanaanta ay u oggol yihiin xagga goobta. Ku wada-shaqeynta shaqeeyaan oo la xiriiraan shirkadooda, haddii aysan ahayn banaan, fog, sidaa darteed maahan inay ku shaqeeyaan meel cayiman. Buur a qowlaysiga tuulo cidla ah waxay noqotay fikrad aan suuragal ahayn oo keliya, laakiin macquul ah Maxay tuulooyinka looga tagay u noqon karaan goobo ku habboon aasaaska a qowlaysiga?
Meelo tayo leh oo la heli karo
Haddii ay wax ka hadhaan tuulooyinkii laga tegey, waa bannaan. Hayso meel ku habboon oo laga helo bulsho qowlaysiga mabda 'ahaan ahaan laheyn wax dhibaato ah. Intaas waxaa sii dheer, tayada meelahaas waa in la muujiyaa. Degaannada miyiga waxay leeyihiin astaamo si dhib leh looga heli karo goobo magaalooyin badan.
Marka hore, qiimaha dhulka iyo guryuhu aad iyo aad buu uga hooseeyaa, marka markaad abuureyso cusub qowlaysiga maalgashiga bilowga ahi waa inuusan aheyn mid aad u sareeya. Dhanka kale, dabeecadda deegaanka miyigu aad ayey u soo jiidan lahayd xirfadlayaasha doonaya inay ka shaqeeyaan jawi deggan oo buuq badan. Aamusnaanta maahan, hase yeeshe, waa faa'iidada keliya. Kaqeybqaado a qowlaysiga miyigu u oggolaan lahaa wada-shaqeynta ku raaxayso cagaar iyo nadiifinta meelaha la wadaago waqtiga firaaqada. Jawigaan, ku habboon kala goynta, wuxuu gacan ka geysan doonaa kordhinta wax soo saarka shaqaalaha iyo abuurista xiriir ka dhexeeya, taas oo ah mid ka mid ah ujeeddooyinka ugu weyn ee qowlaysiga.
Laba ilo oo qiimo leh
El qowlaysiga reer miyigu ka faa'iideysan maayo aasaasayaashiisa iyo wada-shaqeynta yaa ka qayb qaata. Dadyowgu si deg deg ah ayey ugu baahan yihiin dadaallo cusub si looga badbaadiyo baaba'a. El qowlaysiga waa hab cusub oo lagu soo jiito dadka deggan oo dib loogu soo nooleeyo tuulooyin faaruq ah.
Iyadoo ay run tahay in, mabda 'ahaan, wada-shaqeynta kuwaas oo tagaya goobahan si ku meel gaadh ah ayey sidaas u samaynayaan si ku meel gaadh ah, bulshooyinku way is beddelaan, koraan oo ay nafaqeeyaan shaqaale cusub. Sidaa darteed, baahiyo ayaa ka soo kordhay xafiisyadan gaarka ah. Makhaayadaha, jimicsiyada, xafiisyada dalxiiska, qabanqaabiyaasha jidadka socodka, dukaamada, dukaamada waaweyn ... Ganacsiyo badan oo kaladuwan ayaa boos heli lahaa markii ay adeegyadan u fidinayeen beelahan. Ganacsiyadaasi waxay lahaan lahaayeen shaqaale dad guura oo ku sii nagaan doona magaalada. Sidaa darteed, waa in aynaan ka fikirin dhiirrigelintan sida haddii ay un tahay meel ay shaqo ka helaan kuwa sida tooska ah ugu lug leh qowlaysigalaakiin sida a isha qiimaha tuulada oo dhan.
El qowlaysiga Waxay siineysaa xal mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee ka dhasha dalxiiska miyiga, ku meel gaarka. Abuuritaanka qaab dhismeedka ganacsiga iyo shabakadaha lagama maarmaanka u ah faa'iidada sanadka oo dhan. Aynu xusuusano taas wada shaqaynta Iyagu maahan xafiisyo ay shirkado ka kireysan yihiin, sidoo kale maahan hoyga dalxiis ee loogu talagalay in lagu abaabulo khibradaha wada noolaanshaha ganacsiga, waa goobo loogu talagalay iskaashiga iyo hagaajinta wax soosaarka isla markaana shaqeynaya sanadka oo dhan.
Sidee looga shaqeeyaa iskaashi aad wada shaqeysato tuulo cidla ah?
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku noolaato magaalo yar ama aad la yaabban tahay sida dib loogu soo noolayn karo, haddii fikradda ah a qowlaysiga miyiga waxay umuuqataa ikhtiyaar xiiso leh, fiiro gaar ah u yeelo soo socda ee ah talaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u samaysato taada qowlaysiga miyiga tuulo cidla ah.
Meel bannaan hel
Waxaan horeyba ugu adkaynay muhiimada booska waxaana ku adkeysanay taas a qowlaysiga shaqeeya waa muhiim in la helo meel ku filan. Nasiib wanaag ayaa jira astaamaha ku habboon deegaanka miyiga oo bixin doona qiime dheeri ah oo la taaban karo meelahaaga. Iftiinka badan ee dabiiciga ah, waasacnimada, xasilloonida lagama maarmaanka u ah shaqada: kuwani waa xubno si wanaagsan looga qiimeeyo wada shaqeynta iyo deegaanka miyiga oo iyaga ku deeqi kara.
Haddii fikirkaaga dejinta a qowlaysiga Waxay ka timaaddaa doonista si loo caawiyo dib u soo nooleynta magaalo aad horey ugu laheyd guryo, waxaad horey u soo martay tallaabo yar Dhinaca kale, haddii fikraddu soo baxdo maxaa yeelay waxaad raadineysaa fursado xirfadeed oo ka fog magaalooyinka, waa inaad ogaataa inay jiraan guryo iyo xitaa tuulooyin dhan oo iib ah oo aad ka heli karto, internetka, si aad u bilowdo mashruucaaga .
Markaad iibsato dhul aad dhigato qowlaysigaCaadi ahaan, waxaad falanqeyneysaa booskaas kahor intaadan helin. Ka hor intaadan iibsan, waxaad hubisaa in shuruudaha ay sax yihiin si aad fikraddaada uga midho dhaliso. Laakiin haddii aad horey boos uga heshay bilowgii, waxaa muhiim ah inaad barato la soco waxyaabaha aad ku fiicantahay iyo kuwa aad ku liidato. Waa inaad isweydiisaa naftaada waxa booskaas uu ku biirin karo kuwa ka mid ah isla markaana gartaan dhibaatooyinka ay soo bandhigto iyo kuwa dhibaatooyinkaas la xalin karo. Falanqeyntan ayaa sidoo kale kaa caawin doonta go'aamiso waxa bartilmaameedkaagu noqon doono. Markaad si cad u hesho, way kuu fududaan doontaa inaad la qabsato booskaaga baahiyahaaga.
In kasta oo ay jiraan faa iidooyin badan oo laga helayo aasaasidda goobahan shaqo ee tuulo ama magaalo, haddana wax walbaa maaha roog. Helitaanka waa shardi muhiim u ah a qowlaysiga shaqeeya oo magaalooyinka oo dhami ma laha isku-xir gaadiid raaxo leh oo hufan. Isku xirnaanta internetka Tani waa qodob kale oo muhiim ah, in kasta oo shabakaddu sii kordheyso adduunka, haddana weli waxaa jira meelo isku xirnaanta iyo daboolistu ay gaabis yihiin ama deggan yihiin Ugu dambeyn, xaaladaha deegaanka sidoo kale waxay ku adkayn karaan mashruuca inuu shaqeeyo. Haddii tuulada ama magaalada laga hadlayo ay ku taal aag aad u fog ama leh xaalado cimilo aad u xun, waa inaad tixgelisaa tan markaad si habboon u hagaajinayso meelaha oo aad hubinayso sahayda.
Ka fikir soo jeedintaada qiimaha
Markaad bixisid wada shaqayntaada ma kiraysatid miisaska xafiis si aad ula wadaagto kharashyada waxaad siineysaa meel aad ku dhiirrigelin doonto abuurista shabakado, fikrado iyo mashaariic guud. Sidaa darteed, kuma filna in goob la dejiyo oo lagu xayeysiiyo bogga. Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ku bilowdo falsafadan shaqo, waa inaad siisaa wax kale. Waa muhiim in la qeexo waxa sameeya waxaaga qowlaysiga miyiga soo-jeedin soo jiidasho leh iyo sida, laga bilaabo xarumaheeda, waxaad kor ugu qaadi doontaa iskaashiga iyo muuqaalka fursadaha cusub.
Marka, kahor intaadan bilaabin, waa inaad si cad u sheeg waxa ka dhigaya soo jeedintaada mid gaar ah, maxaa yeelay adiga qowlaysiga miyiga ayaa ka faa'iideysan kara mustaqbalkaaga wada-shaqeynta iyo sida ay u kobcin laheyd mashaariicdeeda madaxa banaan (maadaama aysan kaliya raadineynin inay abuurto mashaariic guud).
Abuur istiraatiijiyad isgaarsiineed
Si kastaba ha noqotee, kuma filna in laga caddeeyo xooggaaga qowlaysiga. Waa muhiim in aad daneeyayaasha ogow mashruucaaga. "Wixii aan la gaadhsiin jirin" taasna waa wax ay tahay inaad ku dalbato taada qowlaysiga miyiga. Faa'iido maleh inaad yeelato tas-hiilaadka ugufiican, meesha ugufiican ama fikradaha ugufiican hadii aadan awoodin inaad dadka kale u sheegto waxa ruuxdaadu ay tahay.
Sidaa darteed, shabakadaha bulshada ayaa noqon doona saaxiibkaaga ugu weyn si aad u shaaciso oo aad u xayaysiiso Qabqabashada Si kastaba ha noqotee, istiraatiijiyaddaada isgaarsiinta waa inaysan ku koobnaan xayeysiinta ama joogitaanka goosgooska ah ee shabakadaha. Waa in aad abuur calaamad si kor loogu qaado, sawirkaaga iyo aqoonsigaaga. Waa inaad joogtaa si joogto ah shabakadaha bulshada isla markaana abuuraan degel soo jiidasho leh oo lagu dhejiyo matoorada raadinta. Waxyaabaha aad ku baahinayso astaamahaaga waa inay ahaato tusmo qiimo leh. Waa inaad bixisaa wax ka badan kaliya xayeysiis haddii aad rabto inay xiiseeyaan adiga Qabqabashada Ku faafi falsafada wada shaqaynta meelaha miyiga ah, oo ku saabsan sida nolosha ay u tahay tuulo ama wadaagista sida booskaagu u shaqeeyo maalin kasta, waa fikrado wanaagsan oo aad ugu soo dhoweyn karto mashruucaaga dadweynaha.
Qaabso noocee ah ayaan sameeyaa?
Un qowlaysiga miyiga waa ganacsi oo sidaas darteed in la fuulo waxaad u baahan tahay inaad dejiso qorshe ganacsi oo ay leeyihiin liisamo qaar. Qorshaha ganacsigu wuxuu dejinayaa haddii mashruucaagu socon karo iyo in kale iyo haddii aad leedahay dhaqaale kugu filan oo aad ku bilowdo. Sida rukhsadaha, waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah arrimaha ku siinaya madax xanuunka ugu badan. Xaqiiq ahaan, majiro ruqsad gaar ah oo noocan ah booska, waxay ku xirnaan doontaa aasaasiga nooca waxqabadyada laga fulinayo. Ogow taas nidaamyadu waa muhiim iyo inaad u hureyso qeyb ka mid ah maalgashigaaga iyo waqtigaaga hubso in meheraddaadu buuxiso dhammaan shuruudaha sharciga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Sida looga shaqeeyo wada shaqeyn miyiga tuulo cidla ah